Goorma ayay bilaaban doontaa dhismaha Dekedda Boosaaso? • Horseed Media
You are here: Home / Somali News / Puntland News / Goorma ayay bilaaban doontaa dhismaha Dekedda Boosaaso?
Madaxweynaha Puntland Saciid Cabdilaahi Deni Oo waraysi siinayay Idaacada BBC ayaa ka hadlay caqabada hor-taagan in la bilaabo dhismaha Dekedda Magaalada Boosaaso, Deni waxa uu sheegay in dilkii maareyihii dekedda Boosaaso uu dhaawac wayn u gaystay Puntland ” Dilkii Maareyihii dekedda runtii wuxuu noo gaytsay dhaawac, taas oo ay ka shaqeeyeen dad horumarka Puntland neceb, ula jeedadooduna ay tahay inay cabsi-geliyaan dadka maalgashadayaasha ah ee Puntland imanaya ” ayuu yiri Saciid Deni.
Madaxweynuhu wuxuu sheegay in safarkiisii ugu horeeyay ay ku tageen Imaaraatka lana kulmeen madaxda Shirkada DPWORLD ayna u sheegeen in dilka maareeyaha uu ahaa mid lagu wiiqayo Maalgashiga Puntland, taasna ay la qaateen lana fahmeen.
Madaxweyne Deni waxa uu tilmaamey in gudaha Sanadkaan 2019 ay qorshaynayaan in ay bilaabato dhismaha Dekedda Boosaaso , bartamaha bishaana ay rajaynayaan in qalabkii lagu dhisi lahaa dekedda uu soo gaaro magaalada Boosaaso, maadama lagu jiray xili bad-xiran ahna ay rajaynayaan in dhamaan agabka lagu dhisayo dekedda ay yimaadaan.
Mashruuca Dhismaha Dekedda Boosaaso oo uu saxiixay madaxweynihii hore ee Puntland Cabdiweli Maxamed Cali Gaas ayaan weli la bilaabin iyadoo horay madaxweyne Deni u sheegay in la bilaabi doono bisha September.